Compost: kedu ka esi eji aka gị mee fatịlaịza - Fatịlaịza - 2019
Ndị ọrụ ugbo na ndị na-elekọta ubi na-achọkarị ụzọ isi mee ka owuwe ihe ubi ahụ dịkwuo mkpa, n'ihi na iji nri fatịlaịza dị oke ọnụ ma sie ike ịchọta. Nri mmanu mere ka ha dị ọnụ ala, ha na-enye mkpụrụ dị elu, ma mgbe oge ụfọdụ, ndị nwe nkata ahụ na-achọpụta na ala dị njọ: ọ na-aghọ ìhè, siri ike, ájá, ọ dịghịkwa erikọ ọnụ. Osisi na-eto eto, na-amalite na-etowanye njọ na njọ. Ihe ngwọta dị mma nye nsogbu ndị a bụ itinye ọdụdụ compost na atụmatụ ha. Compost ọma chekwaa ụgwọ nke ịgbara na mkpofu ahihia, ịzụta nnukwu fatịlaịza. Na ihe niile ịchọrọ iji zipu ihe si na kichin na ubi n'ubi compost.
Iji compost na mba
Esi eji aka gị mee compost
Kedu ihe nwere ike ịme compost?
Ihe compost enweghị ike ime
Otu esi achọpụta na compost amaola
Kedu ihe bụ compost
Compost bụ ngwakọta nke ihe dị iche iche nke ihe ndị dị ndụ na organic dị iche iche na-adabere n'okpuru mmetụta nke ọrụ dị mkpa nke microorganisms. Ngwunye compost a kwadebere nke ọma ga-azọpụta ma mezie ala, ga-eme nke ọma dika fatịlaịza na mulch.
Ọ dị mkpa! N'ogige ubi, a na-achọta ngwaahịa "compost," nke bụ ngwakọta nke ala na mineral. O kwesịghị ichegharị na compost.
A pụrụ iji compost mee ihe n'ụzọ dị iche na saịtị ahụ, ha nile na-adabere n'ebumnuche nke ịchọrọ ya. Compost nwere ike ị tozuru okè na ọmụmụ aka. Ndị tozuru okè - pụtara otu na ọchịchịrị, nwere ezigbo ísì. Na compost ga-adị ukwuu, ọ bụghị kpamkpam decomposed ahu: eggshell, alaka alaka, kporo okooko osisi. Ọ na-enwekwa isi ísì.
Ị ma? Ọ dị ezigbo mma ma ọ dị mkpa ịmepụta compost si na nnukwu eriri n'ime ala ụrọ. Ogologo oge mgbe nkwarụ na ala ga-ahapụ akụkụ dị mma nke mgbọrọgwụ.
Iji malite, a pụrụ ịkọpụta compost tozuru okè na sieve ogige iji wepụ ihe ndị dị ize ndụ ma ọ bụ ihe mkpofu ụlọ. Wụsa compost na-eto eto na ibé ma igwu. Ọ bara uru na-egwu ala nke ọma, ebe ọ bụ na ọ dị mma ịgwakọta compost na ụwa, ụfụ nke nitrogen ga-ebelata, ụwa ga-abanye ihe ndị ọzọ bara uru na ihe oriri. Enwere ike tinyekwa compost n'ala n'elu ala, iji nọgide na-acha ahịhịa na saịtị ahụ bụ nhọrọ magburu onwe ya. Maka nnukwu ugbo, a pụrụ igbasa compost ahụ n'elu ala na-adịghị ala ma jikọta ya na juputara. A na-etinye compost maka inye ihe n'ụdị dị otú ahụ: 10-15 square mita. A na-awụsa 40-50 kilogram nke compost n'elu ibé, nke a bụ 6-9 bọket na olu 10 lita.
Ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi na-eji ọgwụ compost eme ihe. Ọ dị mkpa maka ịtọpụ ala ma bụrụ nri dị mma maka ikpuru, dịkwa ka usoro, microorganisms nke dị n'ala. Ọ bụ fatịlaịza na-egbu oge, na-akwado ọrụ ala ma na-azụlite osisi na-eto eto n'oge nile. A na-emepụta ụdị compost site na-egwu ala, ma ọ nwere ike jikọta ya na ala ma tinye ngwakọta a na olulu mmiri. Mgbe ahụ anyị ga-achọpụta otu esi eme compost n'ụlọ.
Ngwakọta compost maka dacha kacha mma na nchekwa compost. Ịkwesịrị ịdebe igbe compost na ebe dị mma maka cottager: azụ azụ nke ubi kichin, n'azụ ụlọ ndị a na-arụpụta ihe, n'ebe ndị ọ na-agaghị emebi ọdịdị nke nkata ahụ.
Ọ dị mkpa! Gbalịa chọpụta ebe mmiri na-eru na mmiri ozuzo nke mere na, nke na-asọpụta n'olulu mmiri compost, adịghị adaba na olulu mmiri ahụ.
Ọ kachasị mma ịkụ aka igbe buru ibu na mgbidi oghere nke osisi planks, ma ọ bụ nanị igwu olulu. Ihe ndi ozo nke ga-adabata n'ime olulu kwesiri inweta oxygen zuru oke, ya mere i kwesighi ime ya ka o di omimi, ebe ihe ndi ozo ga eri ogologo oge.
Iji mee ka compost nye ngwa ngwa, ịkwesịrị ịkwadebe ihe oriri na-edozi ọgwụ compost dị ka:
Na-agbakwunye ndepụta ntanetị ọhụrụ nwere nitrogen. Nke a nwere ike ịbụ ihe ọkụkụ nke nwere nnukwu mmiri: kichin kichin, ahịhịa mown, ata, n'elu.
Na-agbakwunye ihe akọrọ nke nwere carbon. Osisi nke osisi na osisi artisanal, hay, ahihia, ogbugbo, akwukwo ahihia, uyi, akwukwo - ihe ndi ozo nke nwere nnukwu ihe ndi ozo.
Na-agbakwụnye bekee na mee ngwangwa maturation nke compost. A na-eji microorganisms bara uru dị ka compost accelerators. Ndị a nwere ike ịbụ ọhụụ, dịkwa ka usoro, bacteria lactic, na photosynthesizing. A pụkwara ịmalite ịgbatị compost na humus mgbe niile. A na-eresị ya na akpa, ma ọ ka mma ma dịkwa ọnụ ala iji ghọta otú e kwesịrị isi mee humus n'ụlọ. Iji mee nke a, ọ dị anyị mkpa ịchekwa anụ nke anụ ụlọ herbivore na akwa ma ọ bụ olulu, kpuchie ya ma ọ bụ ọta osisi, na-ahapụ ụlọ maka ikuku. A na-ahapụ ya ka ọ banye n'ime mmiri ozuzo, mana ihe bụ isi bụ na mmiri anaghị asacha ya mgbe niile. Mgbe o mechara ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ọ na-echere ruo mgbe ọ ga-abụ ụdị ọdịdị dị mma. Nke a pụtara na humus dị njikere. Ọ na-abụkarị n'ime afọ.
Ịnọgide na-adịgide adịgide nke ngwakọta compost na ịhụ ka edozi ikpo ọkụ na usoro nhazi.
Ị ma? Dị ka ihe ọkụkụ dị ọhụrụ, a pụrụ ịkụzi mkpụrụ osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ: alfalfa, clover, legumes, sainfoin. Ha nwere ụba nitrogen.
Ọ dị mkpa ịgbakwunye ezigbo akọrọ akụrụngwa na humus na-emegharị ọbụla. Nke a ga-enye ohere iji kesaa ikuku na ngwakọta, nke ga-emetụta ọganihu nke fatịlaịza ma n'ọdịnihu ga-enye anyị nri compost nri.
N'etiti etiti kpokọtara okpomọkụ ahụ n'oge maturation nke compost ruru 60-75 ° C Iji hụ na ị na-ekesa okpomọkụ na ụlọ ahịa ahụ, ị ​​nwere ike iji akwa ákwà, tarpaulin, efere ochie na mpempe akwụkwọ linoleum na ụlọ ahịa compost.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile. Iji mee ka compost dị na mba ahụ, ọ dị mkpa ka ị jikọọ ya oge, si otú a na-ekesa mmiri na ikpo ọkụ n'ime ikpo okwu ahụ. Na oge akọrọ nke afọ, ọ nwere ike na a ghaghị ịṅụ mmiri, kamakwa iji zere ịnọ na mmiri.
Ọ bụrụ na isi ísì na-eru nso na igbe compost, ọ pụtara na e nwere ọtụtụ amonia na ezughị oxygen na ya, ị kwesịrị ịgbakwunye ihe ọkụkụ. Ngwurugwu na-eme ka ọ dị elu n'ụzọ dị ngwa ga-ewe oge site na ọnwa 3 ruo 8 na-adabere na ọnọdụ ndị e kere maka nkwadebe ya.
Enwere ike ịme ihe na-eme ngwa ngwa. Usoro a dị mfe. Maka nmalite, ọ dị anyị mkpa igwu mmiri dị omimi, ma obosara zuru oke. Compost ga-abụ ahịhịa, alaka, osisi rere ure. N'ime olulu a, ị nwere ike ịtinye nri ọhụrụ, nke ga-eme ka ọ bụrụ nke humus, nke dị mma na mgbatị. A na-ebuba ihe a nile n'ime olulu ma jiri obere ala ala. Ịkwadebe ngwakọta dị otú ahụ ga-abụ maka afọ 2-3.
Ọ bụrụ na saịtị ahụ nwere 2-3 ebe maka olulu compost ma jupụta ha kwa afọ, mgbe ahụ n'ime afọ 2-3 ị nwere ike ịnweta ego a chọrọ maka njikọta njikọta nke ala.
Maka ezigbo nri na ngwa ngwa, ị kwesịrị iji:
mowed ahihia na akwukwo dakwasiri;
ụra na-ehi ụra na kọfị;
ngwaahịa ndị na-emetụtaghị ọgwụgwọ okpomọkụ: mkpịsị anụ, akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi;
alaka osisi na osisi;
akwụkwọ, feathers, ajị, ákwà nke sitere na ihe onwunwe;
ahịhịa, sawdust, osisi shavings, mkpụrụ husks.
N'ihi na ngwa ngwa ga-abịaru nso:
osisi fir na mgbe ebighi ebi;
nsị anụ na nnụnụ nnụnụ.
Ọ dị mkpa! Na mba Europe na United States na ịmepụta akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ maka akwa anaghị eji ihe ndị na-emerụ ahụ na ọla arọ. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ banyere àgwà nke akọwa, mgbe ahụ, ngwaahịa ndị dị mma ka ị ghara ịgbakwunye compost.
Otú ọ dị, ọ bụghị ngwaahịa niile na ihe mkpofu nwere ike iji mee compost.
A gaghị atụ aro ịtinye na compost ikpo:
Akwukwo akwukwo nri, nkpuru ocha na mkpuru osisi mgbe o mesoro ya.
Egwu, chara acha, perennial ata.
Osisi mgbe ị na-eji ọgwụ osisi.
Ụdị nke ndị nkịtị na ụmụ mmadụ.
Asusu na uyi site na oku na ahihia onu.
Osisi na àkwá na larvae nke ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ.
Ọ dị mkpa! N'ihe na-adịghị mma nke anụ anụmanụ na ndị mmadụ, ị chọrọ otu pụrụ iche - ụlọ mposi. A na-echekwa ụdị osisi ndị ahụ na-eri nri maka ndụ nke microorganisms na ikpuru.
Akwụkwọ compost agwụ ga-agba aja aja ọchịchịrị, nke na-agbaghasị agbagha, ọ gaghị agbaba n'ime ihe. Isi ya ekwesịghị ịdị nkọ, na ihe kacha mma na compost na-esi ísì ọjọọ nke ụwa.
N'iji ndokwa ndị a mee, ị nwere ike mee ka compost n'onwe gị ma mee ka ala dị na saịtị gị dịkwuo ala, ma kachasị mkpa - enyi na gburugburu ebe obibi.
Kedu etu esi edozi vitamin erughi oke ehi (umu ehi)
Ihe ọjọọ nke garlic na-emetụta ahụ mmadụ
Ntụziaka dị mfe na nke mbụ maka nri ọka na ngwa ngwa na-esi nri
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Akụkụ nke ịme compost na-eme ya n'onwe gị